“ပွညျသူ့ကာကှယျ​ရေး တပျPDF” တို့ရငျဖှငျ့ပွောကွား – Shwe Yaung News
“ပွညျသူ့ကာကှယျ​ရေး တပျPDF” တို့ရငျဖှငျ့ပွောကွား
ဒီမယျဗြာ့ ဘယျ PDF ကမှ ပွညျသူ့ပိုကျဆံကို ဓားပွမတိုကျပါဘူး ပွညျသူကိုလဲ ဒုက်ခမ​ပေးပါဘူး…….
ဘာလို့လဲဆိုရငျ PDF ဆိုတာပွညျသူစဈစဈတှကေပဲ မှေးဖှားပေးလိုကျလို့…ပွညျသူရငျခှငျကထှကျလာခဲ့လို့ပဲ…..
မတရားမူ​​​တှမေတရားလုပျ​နတော ​တှကေို မခံနိုငျလို့ ပွညျသူ့ကာကှယျ​ရေး PDF ဆိုတာ ​ပျေါ​ပေါကျလာရတာပါ ဒါ​ကွောငျ့မို့ အခုလို လုရကျခိုးဆိုး သတျဖွတျ မတရား လုပျ​နတော​တှကေို PDF​​တှလေုပျတယျ
​ပွောထှကျတာ မလှနျဘူးလားဗြာ အသဲထဲကနာကငျြရပါတယျဗြာ..ဘယျ PDF ကမှပွညျသူ့ဆီက အတငျးအဓမ်မမတောငျးဘူး။
ဘာလို့လဲဆိုရငျ ပွညျသူတှေ ကိုယျတိုငျက အလိုကျတသိ ထောကျပံ့နလေို့ပဲ…….ကြ​နျောတို့ကိုယျတိုငျကမယူရကျမစားရကျလို့ ပွနျတားထားရတယျဗြ…..
ဘယျ PDF ကမှရှာတှေ၊ အိမျတှေ၊ ဈေးတှကေို မီးမရှို့ဘူး ဘုနျးကွီး​ကြောငျး ဘုရား​​ကြောငျး ဘလီ​တှကေို ဗုံးမခှဲသလို လကျနှကျကွီးနဲ့လညျး ပဈမခဘြူး…..ဘယျ​ဆေးရုံ ဘယျစာသငျ​ကြောငျးထဲကိုမှလဲ ဝငျမ​နဘေူး တပျမဆှဲဘူး…..
ဘာလို့လဲဆိုရငျ ပွညျသူတှရေဲ့ခကျခဲ ပငျပနျးမှု၊ မလုံခွုံမှုတှကေို ကြ​​နျောတို့ PDF​တှေ အသိဆုံးဖွဈလို့ပဲ…PDF ဆိုတာ ပွညျသူ့အတှကျပဲ အလုပျလုပျတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုရငျ ပွညျသူ့​ကြှေးတဲ့ထမငျးကို စား​နရေလို့ပဲ…….
PDF ဆိုတာ ပွညျသူအမြားကိုဒုက်ခပေးလို သူတိုငျးရနျက ကာကှယျ​ပေးတယျ။ဘာလို့လဲဆိုရငျ ကြ​နျောတို့PDFစဈသညျ​တျော​တှကေ ပွညျသူကို ကာကှယျဖို့ တာဝနျအရှိဆုံးမို့ပါ…….အ​ရေး​တျောပုံ​အောငျရမညျ ဟုပွောကွားထားပါသညျ။
ဒီမယ်ဗျာ့ ဘယ် PDF ကမှ ပြည်သူ့ပိုက်ဆံကို ဓားပြမတိုက်ပါဘူး ပြည်သူကိုလဲ ဒုက္ခမ​ပေးပါဘူး…….
ဘာလို့လဲဆိုရင် PDF ဆိုတာပြည်သူစစ်စစ်တွေကပဲ မွေးဖွားပေးလိုက်လို့…ပြည်သူရင်ခွင်ကထွက်လာခဲ့လို့ပဲ…..မတရားမူ​​​တွေမတရားလုပ်​နေတာ ​တွေကို မခံနိုင်လို့ ပြည်သူ့ကာကွယ်​ရေး PDF ဆိုတာ ​ပေါ်​ပေါက်လာရတာပါ ဒါ​ကြောင့်မို့ အခုလို လုရက်ခိုးဆိုး သတ်ဖြတ် မတရား လုပ်​နေတာ​တွေကို PDF​​တွေလုပ်တယ် ​ပြောထွက်တာ မလွန်ဘူးလားဗျာ အသဲထဲကနာကျင်ရပါတယ်ဗျာ..
ဘယ် PDF ကမှပြည်သူ့ဆီက အတင်းအဓမ္မမတောင်းဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုရင် ပြည်သူတွေ ကိုယ်တိုင်က အလိုက်တသိ ထောက်ပံ့နေလို့ပဲ…….ကျ​နော်တို့ကိုယ်တိုင်ကမယူရက်မစားရက်လို့ ပြန်တားထားရတယ်ဗျ…..
ဘယ် PDF ကမှရွာတွေ၊ အိမ်တွေ၊ ဈေးတွေကို မီးမရှို့ဘူး ဘုန်းကြီး​ကျောင်း ဘုရား​​ကျောင်း ဘလီ​တွေကို ဗုံးမခွဲသလို လက်နှက်ကြီးနဲ့လည်း ပစ်မချဘူး…..ဘယ်​ဆေးရုံ ဘယ်စာသင်​ကျောင်းထဲကိုမှလဲ ဝင်မ​နေဘူး တပ်မဆွဲဘူး…..ဘာလို့လဲဆိုရင် ပြည်သူတွေရဲ့ခက်ခဲ ပင်ပန်းမှု၊ မလုံခြုံမှုတွေကို ကျ​​နော်တို့ PDF​တွေ အသိဆုံးဖြစ်လို့ပဲ…PDF ဆိုတာ ပြည်သူ့အတွက်ပဲ အလုပ်လုပ်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် ပြည်သူ့​ကျွေးတဲ့ထမင်းကို စား​နေရလို့ပဲ…….
PDF ဆိုတာ ပြည်သူအများကိုဒုက္ခပေးလို သူတိုင်းရန်က ကာကွယ်​ပေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင် ကျ​နော်တို့PDFစစ်သည်​တော်​တွေက ပြည်သူကို ကာကွယ်ဖို့ တာဝန်အရှိဆုံးမို့ပါ…….အ​ရေး​တော်ပုံ​အောင်ရမည် ဟုပြောကြားထားပါသည်။
“ကောကျရတဲ့ ပိုကျဆံ၆သိနျးကြျောကို ပိုငျရှငျအား ပွနျလညျပေးအပျခဲ့သညျ့ လူငယျလေးမောငျညဏျမိုး”